Waan na dhibe tokko mee; Oromiyaa magaalaa hedduu keessatti manni barnootaa garri caalaan afaan Amaaraatiin barsiisu Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaan na dhibe tokko mee; Oromiyaa magaalaa hedduu keessatti manni barnootaa garri caalaan afaan Amaaraatiin barsiisu
Waan na dhibe tokko mee; Oromiyaa magaalaa hedduu keessatti manni barnootaa garri caalaan afaan Amaaraatiin barsiisu
Waan na dhibe tokko mee;
Oromiyaa magaalaa hedduu keessatti manni barnootaa garri caalaan afaan Amaaraatiin barsiisu jedhame. Ijoolleen Oromoo afaan Amaaraatiin baratti jedhame.
Haala kanaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa haata’u jennee utuu iyyinuu afaan Amaaraa afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta’uuf deema! Kanin jedhu, manni barnootaa hamma kanaa baay’atu kun afaan Amaaraatiin Oromiyaa keessatti akka banamu kan eyyama kennu eenyu? Bara baraan kan eeyyama isaanii haaressu eenyu? Biiroo Barnoota Oromiyaa mitii? Lakki Waaqarraa eyyama fudhatan akka hin jenne. Kan gaafatamuu qabu warra mana barnootaa kanneen banee barsiisu utuu hin taane warra eyyama kennedha!
Nuti fagootti orma faccisaa oolla, bukoon garuu asuma mana keenya ciisa!
Eehee, akkana kunoo! Lammiin haa gammadu; goomattuun haa gubattu!
Maatii keenya waliin Oromummaan guddachuun, eenyummaa saba keenyaa guddisa!!
Warri of taatan, eebbifamaa!
Toltu Tufaan Eessa Jirtii? Where is Toltu Tufa?
Gageessaa Ol aanaan Mana Amantii Ortodokisii itoophiyaa kan ta’e Abuna Maatiyaas